XOG: Fahad Yaasiin oo doorweyn ku leh dhismaha Xukuumadda cusub | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Fahad Yaasiin oo doorweyn ku leh dhismaha Xukuumadda cusub
XOG: Fahad Yaasiin oo doorweyn ku leh dhismaha Xukuumadda cusub
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in taliyaha Nabad sugida Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo uu door weyn ku leeyahay dhismaha golaha Wasiirada.
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku jira wadatashiyadii ugu dambeeyay ee uu ku soo magacaabayo Xukuumadda cusub, taas oo looga fadhiyo iney meesha ka sii wado shaqadii Xukuumaddii dhacday.
Fahad Yaasiin oo 8-bishan xilli habeen ah Xarunta Nabadsugida ee Habar Khadiijo kula kulmay Ra’iisal wasaare Rooble ayaa kala hadlay arrimo quseeya xaalada siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan dhismaha Golaha Wasiirada iyo arrimo kale oo la rumeysan in Fahad door weyn ku leeyahay.
Sida xogta aan ku helnay, Fahad Yaasiin ayaa doonaya in xubnaha Wasiirada ee la soo wado ay noqdaan kuwo hayin ah oo wax kasta oo loo meeriyo fulin kara,islamarkaana aamisan 100% madaxweyne Farmaajo.
Xukuumadda cusub ayaa la filayaa iney ka soo dhex muuqdaan xubno ku cusub siyaasadda, kuwaas oo qaarkood loo wado in xildhibaano laga dhigo si ay markale u doortaan hoggaamiyaha dalka Maxamed C/llaahi Farmaajo afarta sano ee soo socota.
Taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo inta badan dhaq dhaqaaqiisa kooban yahay, isla markaana aan ka soo muuqan kulamada amniga Qaranka ayaa Mas’uuliyiinta dowladda iyo Madaxda qaar ka mid ah dowlad Goboleedyada ay ugu tagaan Xaruntiisa.